स्काभेटरले किच्दा स्थानीयको मृत्यु ! | Ekhabar Nepal
बैतडी, कात्तिक ७ गते ।
बैतडीमा विहिबार बिहानै सडक खन्न गएको डोजरले च्यापेर एक जनाको ज्यान गएको छ ।
बैतडीको मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा सडक खन्न गएको स्काभेटर मुनी च्यापिर स्थानीय शुक्रसिंह पुजाराको मृत्यु भएको छ ।
बैतडीमा डोजर र स्काभेटरले अहिलेसम्म पाँच जनाको ज्यान लिईसकेको छ । नेपाल सरकारले एक करोड भन्दा मुनीका ग्रामीण सडक योजना निर्माण गर्दा डोजर र स्काभेटर चलाउन नपाउने परिपत्र गरे पनि डोजरले सरकारी निर्देशन अटेर गर्दै आईरहेका छन् ।
सडक खन्न गएको स्भाटेटरले स्थानीयलाई किचेर मेत्यु भएको विषयमा मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष बलभन्द्र दयालले आफ्नो वडामा दुःखद् घटना भएको बताउनुभएको छ ।
एक करोड भन्द मुनीको बजेट भएको सडमा डोजर चलाउन नपाउने सरकारी निर्देशन किन पालन हुँदैन ? भन्ने विषयमा अध्यक्ष दयालले छिटो विकास गर्न नगरपालिकाले मेशिन प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता हरेको बताउनुभयो ।
बैतडीमा स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिकै डोजर सडक निर्माणमा संलग्न भएकोले प्रशासनले डोजर नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
यस्तै ग्याँस बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको घटना स्थलमै मृत्यु भएको छ । ग्यास बोकेर धनगढीबाट दार्चुला जाँदै गरेको ट्रक बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर २, सिन्के लेकमा दुर्घटना हुँदा चालक गोपालसिंह धामीको घटना स्थलमै मृत्यु भएको छ ।
ट्रक बिहिबार विहार ४ः३० बजे दुर्घटनामा परेको हो भने स्काभेटरले विहान ७ः ३० बजे स्थानीयलाई किचेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।